အူမကြီးကင်ဆာ - Samitivej Hospital Bangkok Thailand - JCI Accredited World Class Hospital
ကာကွယ်၊ ရှာဖွေ၊ ကုသ ခြင်းဖြင့် – အူမကြီးကင်ဆာဘေး ကင်းဝေးစေနိုင်ပါသည်…
ဖော်ထုတ်ထားတဲ့ အသားပိုအလုံးလေးတွေရဲ့ ၂၀% ဟာ တကယ်တော့ ရှာဖွေတွေ့ရှိဖို့ခက်ခဲပြီး အချိန်တိုအတွင်းမှာ အူမကြီးကင်ဆာအဆင့်ကို ပြောင်းသွားဖို့ အလားအလာရှိတဲ့ အသားပိုလေးတွေဖြစ်တယ် ဆိုတာ သင် သိပါသလား။
Narrow Band Imaging (NBI) နည်းလမ်းနဲ့ အူမကြီးမှန်ပြောင်းကြည့်ပြီး အူမကြီးကင်ဆာကို ရှာဖွေ ကာကွယ်ထားနိုင်ပါတယ်။
ဒဏ်ရာအသေးဆုံးခွဲစိတ်မှုဖြစ်တဲ့ အသေးစားမှန်ပြောင်းကြည့်ခွဲစိတ်ကုသနည်းဖြင့် အူမကြီးကင်ဆာကို ခွဲထုတ်ပစ်လိုက်နိုင်ပါတယ်။
“ပစ်မှတ်ထားကုထုံး”လို့ခေါ်တဲ့ တစ်ဦးချင်းအလိုက်တိကျတဲ့ ဆေးကိုပေးတဲ့နည်းနဲ့လည်း အူမကြီးကင်ဆာကို ကုသနိုင်ပါတယ်။
Narrow band imaging (NBI) နည်းလမ်းနဲ့ အူမကြီးမှန်ပြောင်းကြည့်ပြီး အူမကြီးကင်ဆာကို ရှာဖွေ ကုသခြင်း
လူတိုင်း အသက် ၄၅ နှစ်ရောက်တဲ့အခါ အူမကြီးကင်ဆာအတွက် စစ်ဆေးသင့်တယ်လို့ အမေရိကန်ကင်ဆာအသင်းကြီး က အကြံပြုထားပါတယ်။ ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် မိသားစုထဲမှာ အူမကြီးကင်ဆာဖြစ်ဖူးတဲ့သူရှိတယ်၊ ကိုယ့်မှာလည်း ကင်ဆာဖြစ်နိုင်ချေဟာ သာမန်လူတွေထက်များနေတယ်ဆိုရင် ၄၅ နှစ် မတိုင်မီမှာကိုပဲ အူမကြီးကင်ဆာကို စစ်ဆေးရှာဖွေသင့်ပါတယ်။
ဒီလိုအခြေအနေမျိုးရှိတဲ့သူဆိုရင် ဘယ်အရွယ်မှာ စပြီး စစ်ရမလဲဆိုတော့ ကိုယ့်မိသားစုထဲက ကင်ဆာဖြစ်ဖူးတဲ့သူ စဖြစ်တဲ့ အသက်အရွယ်ထက် ၁၀ နှစ် စောပြီး စစ်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ ဆိုလိုတာက အဖေက အသက် ၅၀ မှာ အူမကြီးကင်ဆာ စပြီး ဖြစ်ခဲ့တယ်ဆိုရင် ကိုယ်က အသက် ၄၀ ကတည်းက စပြီး စစ်ဆေး ရှာဖွေရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
ဒီလိုစစ်ဆေးလို့ ကိုယ့်မှာ ၁ စင်တီမီတာထက်သေးတဲ့ အသားပိုအလုံးကို တွေ့ရတယ်ဆိုရင် နောက် ၃နှစ်ကနေ ၅ နှစ် အတွင်းမှာ တစ်ကြိမ် ထပ်စစ်ဖို့ လိုအပ်ပါတယ်။ အဲဒီအချိန်မှာ အသားပိုအလုံးဟာ ၁ စင်တီမီတာထက် ပိုကြီးနေပြီ ဆိုရင်တော့ နောက် ၁ နှစ်ကနေ ၃ နှစ်အတွင်း မှာ ထပ်ကြည့်ဖို့ လိုပါတယ်။ စစစ်တဲ့အချိန်မှာ အသားပိုအလုံး မတွေ့ဘူး ဆိုရင်တောင် ၅ နှစ်ကနေ ၁၀ နှစ်အတွင်းမှာ တစ်ကြိမ်လောက် ထပ်ကြည့်ဖို့ လိုပါတယ်။ (ဆီးချိုရောဂါဖြစ်ဖို့ အခြေအနေ မြင့်မားတဲ့သူတွေအတွက်ကတော့ တစ်ဦးချင်းစီရဲ့ ခန္ဓာကိုယ်အခြေအနေအလိုက် အူမကြီးကင်ဆာဖြစ်လာနိုင်မှုအပေါ် မူတည်ပြီးလိုအပ်သလို စစ်ဆေးတဲ့ အကြိမ်အရေအတွက်ကို တိုးမြှင့်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။)
အူမကြီးမှန်ပြောင်းကြည့်ခြင်းဖြင့် အူမကြီးကင်ဆာကို ကာကွယ်နိုင်ပါတယ်။ ဆစ်မီတဝေ့ဆေးရုံကြီးဟာ ၂၀၁၅ ခုနှစ်ကတည်းက စပြီး ဂျပန်နိုင်ငံရဲ့ နာမည်ကျော် အူလမ်းကြောင်းမှန်ပြောင်းကြည့်ဆေးရုံကြီးဖြစ်တဲ့ SANO ဆေးရုံကြီးနဲ့ ပူးပေါင်းပြီး ဂျပန်နိုင်ငံရဲ့ ခေတ်မီနည်းပညာတွေကို အသုံးပြုကာ အူမကြီးကင်ဆာ ရောဂါရှာဖွေတွေ့ရှိမှုနှုန်းဟာ အရင်ကထက် ၂ ဆ ပိုမို မြင့်တက်ခဲ့ပါတယ်။
၂၀၁၅ ခုနှစ်ကတည်းက ဆစ်မီတဝေ့ အသည်းနဲ့ အစာခြေစနစ်အင်စတီကျု ကနေပြီးတော့ အူမကြီးမှန်ပြောင်းကြည့်ခြင်းနဲ့ အခြား မှန်ပြောင်းကြည့်ကုသခြင်းဆိုင်ရာပညာတွေအတွက် ဂျပန်နိုင်ငံကို ပညာတော်သင်များ စေလွှတ်ခဲ့သလို့ ဂျပန်နိုင်ငံကလည်း ထိုင်းနိုင်ငံကို လာရောက်ပြီး ပညာရပ်ဆိုင်ရာ အတွေ့အကြုံ မျှဝေမှုတွေ၊​ ဆစ်မီတဝေ့က လူနာတွေကို လေ့လာမှုတွေ စတာတွေ လုပ်ခဲ့ကြပါတယ်။ ဆက်လက်ဖတ်ရှုရန်
ပုံမှန်ထက် ၂ ဆ ပိုမို တိကျပြတ်သားတဲ့ ဂျပန်နည်းပညာတစ်ခု
1. ကင်ဆာဖြစ်သွားနိုင်သောအကြိတ်များ (Adenoma) ရှာဖွေနိုင်မှုနှုန်းတွင် 50% (၂၀၁၈ ဒီဇင်ဘာ အူမကြီးမှန်ပြောင်းကြည့်စာရင်းများအရ)
အူမကြီးမှန်ပြောင်းကြည့်တဲ့အချိန်မှာ တွေ့ရတဲ့ အဖုအသီးလေးတွေမှာ ကင်ဆာအဆင့်ကို ရောက်မသွားနိုင်တဲ့ hyperplastic polyps နဲ့ အူမကြီးကင်ဆာအဆင့်ကို ပြောင်းလဲသွားနိုင်တဲ့ adenomatous polyps ဆိုပြီး ၂ မျိုး ရှိပါတယ်။ အူမကြီးမှန်ပြောင်းကြည့်စစ်ဆေးချက်တစ်ခုချင်းကို the American Society for Gastrointestinal Endoscopy (ASGE) ရဲ့ စံသတ်မှတ်ချက်များ နဲ့ နှိုင်းယှဉ်တိုက်ဆိုင်စစ်ဆေးပေးခြင်းဖြင့် ဆစ်မီတဝေ့ဆေးရုံကြီးဟာ သူ့ရဲ့ အူမကြီးမှန်ပြောင်းကြည့်စစ်ဆေးမှုများရဲ့ အရည်အသွေးများကို မှတ်ကျောက်တင်ပေးလျက်ရှိနေပါတယ်။ သတ်မှတ်ချက်များအရ အသက် ၅၀နဲ့ အထက်များရဲ့ ၂၅% နီးပါးမှာ adenomatous polyps တွေ ရှိနေနိုင်တယ်လို့ ဆိုပါတယ်။ အဲဒါကို ကင်ဆာဖြစ်သွားနိုင်သော အကြိတ်များရှာဖွေနိုင်မှုနှုန်း (adenoma detection rate) လို့ ခေါ်ပါတယ်။ ဒီလိုအကြိတ်တွေ ရှာဖွေတွေ့ရှိတဲ့ နှုန်းဟာ အဆိုပါ ပျမ်းမျှနှုန်းထက်များနေတယ် ဆိုတာ အူမကြီးမှန်ပြောင်းကြည့်နည်းပညာဟာ မြင့်မားပြီးတော့ ပိုမိုတိကျပြတ်သားစွာ ရှာဖွေနိုင်လို့ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီလိုမြင့်မားမှလည်း serrated adenomatous polyps လို တွေ့ရှိဖို့ ခက်ခဲတဲ့ အဖုအကြိတ်တွေကို ရှာဖွေနိုင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီလိုရှာဖွေနိုင်လို့လည်း အူမကြီးထဲက ကင်ဆာဖြစ်နိုင်တဲ့ အလုံးအကြိတ်မှန်သမျှကို ပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင် ဖြတ်ထုတ်ပေးနိုင်နေတာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
အဲဒီလို ယေဘုယျရှာဖွေတွေ့ရှိတဲ့ နှုန်းဟာ ၂၅% လို့ လက်ခံထားတဲ့အချိန်မှာ ဆစ်မီတဝေ့ ဆူခွန်ဗစ်ဆေးရုံကြီးရဲ့ အစာအိမ်နဲ့ အူလမ်းကြောင်းဆိုင်ရာဆရာဝန်များက adenoma detection rate ကို ၅၀% အထိ ရအောင် စွမ်းဆောင်နိုင်ခဲ့ကြပါတယ်။ ဒါဟာ ASGE က သတ်မှတ်ထားတဲ့ စံနှုန်းရဲ့ ၂ ဆ ကျော် ပိုမိုတိကျတဲ့ အဖြေကို ထုတ်ပေးနိုင်တာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ အခုလို ကင်ဆာဖြစ်သွားနိုင်သော အကြိတ်များရှာဖွေနိုင်မှုနှုန်းကို မြှင့်တင်ပေးနိုင်တာဟာ ဆစ်မီတဝေ့ရဲ့ စစ်ဆေးရှာဖွေနိုင်မှုအရည်အသွေး မြင့်မားမှုကို သက်သေထူလိုက်တာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
ဆစ်မီတဝေ့ရဲ့ ရေရှည်မိတ်ဖက်ဖြစ်တဲ့အပြင် အူမကြီးကင်ဆာအတွက် အူလမ်းကြောင်းမှန်ပြောင်းကြည့်တဲ့နေရာမှာ အခုလို အဖြေတွေရရှိနိုင်ဖို့ အသုံးပြုရတဲ့ NBI နည်းပညာနဲ့ပတ်သက်ပြီး အစစအရာရာ အရည်အသွေးကို တိုးတက်မြင့်မားလာအောင် ဦးဆောင်စီမံပေးတဲ့ ဂျပန်နိုင်ငံ SANO ဆေးရုံကိုလည်း အထူးကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ အသားပိုတွေရှိနေတာကို အစိမ်း/အပြာ ရောင်ခြည်တန်းလေးတွေအသုံးပြုပြီး ဆရာဝန်တွေဟာ ဖောင်းနေတဲ့နေရာ တွေ၊ လွှသွားပုံစံအဖုလေးတွေ စသည်ဖြင့် ရှင်းလင်းပြတ်သားစွာတွေ့မြင်နိုင်တဲ့ အတွက် ကင်ဆာဖြစ်နိုင်တဲ့ အသားပိုတွေကို ကောင်းစွာ ရှာဖွေနိုင်ခဲ့ကြပါတယ်။ ဒါတွေဟာ ပုံမှန် အဖြူရောင် အလင်းတန်းတွေနဲ့ကြည့်ရင် ဘယ်လိုမှ မမြင်နိုင်တဲ့ အရာတွေပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါ့အပြင် NBI ရဲ့ international colorectal endoscopic (NICE) က ရောဂါရှာဖွေရေးနဲ့ နောက်ဆက်တွဲကုသရေးအတွက် ဆုံးဖြတ်ချက်တွေကိုလည်း ရှုပ်ထွေးမှုမရှိဘဲ ချက်ချင်းချမှတ်နိုင်စေပါတယ်။ ဥပမာ – ကင်ဆာဖြစ်နိုင်ချေမရှိတဲ့အသားပို hyperplastic polyps ဆိုရင် ချက်ချင်း ဖြတ်ထုတ်ပစ်နိုင်ပြီး ကင်ဆာဖြစ်နိုင်ချေရှိတဲ့ adenomatous polyps ဆိုရင် ချက်ချင်းပဲ အသားစ စစ်ဆေးမှု ပြုလုပ်ပြီး အဲဒီ အသားပိုဟာ ကင်ဆာ ဟုတ်မဟုတ် ချက်ချင်းအဖြေထုတ်ပေးနိုင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ကင်ဆာ ဆိုရင်လည်း ဘယ်အဆင့်ရောက်နေပြီဆိုတာကို အညွှန်းကိန်းတွေနဲ့ တစ်ခါတည်းဖော်ပြပြီး လိုအပ်တဲ့ ကုသမှုတွေကို ဆောင်ရွက်ပေးနိုင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။
ဒါ့အပြင် adenomatous polyp ဟာ ၂ စင်တီမီတာထက်ပိုကြီးနေတယ်ဆိုရင် အဲဒီ အသားပိုအလုံးကို အရင်လို ခွဲစိတ်စရာမလိုတော့ဘဲ ESD (endoscopic submucosal dissection) ဆိုတဲ့နည်းလမ်းကိုသုံးပြီး ဖြတ်ထုတ်ပစ်နိုင်ပါတယ်။ လူနာအနေနဲ့ အချိန်တိုအတွင်းမှာ ပြန်လည်နာလန်ထူနိုင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ဒီ အဆင့်မြင့်နည်းပညာ ESD ကို အသုံးပြုနိုင်ဖို့အတွက်ကတော့ သက်ဆိုင်ရာ အစာအိမ်နဲ့ အူလမ်းကြောင်းဆရာဝန်ဟာ အတွေ့အကြုံများဖို့နဲ့ ပညာပြည့်ဝဖို့ လိုပါတယ်။ ဆစ်မီတဝေ့ရဲ့ အစာအိမ်အူလမ်းကြောင်းဆရာဝန်ကြီးများအဖွဲ့ကတော့ ဒီနည်းပညာအတွက် ဂျပန်နိုင်ငံ SANO ဆေးရုံအဖွဲ့နဲ့ ပူးပေါင်းလက်တွဲလုပ်ကိုင်ကြပြီး ကေ့စ်ပေါင်းများစွာမှာ အတွေ့အကြုံတွေ ဖလှယ်ထားပြီးသားဖြစ်လို့ ပညာနဲ့ အတွေ့အကြုံမှာတော့ လုံးဝကျွမ်းကျင်ပြီး စိတ်ချရပါတယ်။
2. အူလမ်းကြောင်းမှန်ပြောင်းကြည့်စစ်ဆေးမှု အရည်အသွေး မြှင့်တင်ခြင်း
အူလမ်းကြောင်းမှန်ပြောင်းကြည့်စစ်ဆေးမှုမပြုခင်မှာ လူနာရဲ့ အူလမ်းကြောင်းဟာ သန့်နိုင်သမျှ သန့်ရှင်းနေဖို့ လိုပါတယ်။ ဒါကြောင့် မနက်စောစောမှာ ဝမ်းနှုတ်ဆေးလိုဟာမျိုးသောက်ပြီး အူမကြီးထဲက အစာဟောင်းနဲ့ အညစ်အကြေး တွေကို ရှင်းထုတ်ထားပြီးမှ မှန်ပြောင်းကြည့်ဖို့ ပြင်ဆင်ရပါတယ်။ အူလမ်းကြောင်း သန့် သွားပြီဆိုမှ နေ့ခင်းလောက်မှာ မှန်ပြောင်းကြည့်ပါတယ်။ အူမကြီးကို ညကတည်းက ရှင်းထားပြီး မနက်စောစောမှာ မှန်ပြောင်းကြည့်ခြင်း ထက် ပိုကောင်းတဲ့ အဖြေကို ရရှိနိုင်ပါတယ်။
3. NBI colonoscopy နည်းစနစ်ဟာ Serrated Adenomas လို့ခေါ်တဲ့ အဖုအလုံးလေးတွေကို ရှာဖွေနိုင်ဖို့ အခွင့်အလမ်း ပိုများပါတယ်
Serrated adenomas တွေဟာ အူမကြီးရဲ့ အတွင်းနံရံတွေနဲ့ ပုံစံတူနေတဲ့အတွက် သူတို့ကို ခွဲခြားပြီး ရှာဖွေဖော်ထုတ်နိုင်ဖို့ အလွန် ခက်ခဲပါတယ်။ ပြီးတော့ အဲဒီ အဖုလေးတွေဟာ အချိန်တိုအတွင်း ကင်ဆာ ဖြစ်သွားနိုင်တဲ့အတွက် အန္တရာယ်လည်းကြီးမားပါတယ်။ အခြားအဖုတွေက ၂ နှစ်ကနေ ၁၀ နှစ်အတွင်းလောက်ကျမှ ကင်ဆာအဖြစ်ကို ပြောင်းသွားတဲ့အချိန်မှာ သူက ၂ နှစ်ကနေ ၆ နှစ်တွင်းမှာ မြန်မြန်ဆန်ဆန်ပဲ ကင်ဆာဆဲလ်တွေ ဖြစ်သွားတတ်ပါတယ်။ ဖြစ်ပြီဆိုရင်လည်း ပြန့်တာ အလွန် မြန်ပါတယ်။ NBI နည်းစနစ်နဲ့သာလျှင် ဒါတွေကို ကွဲကွဲပြားပြားမြင်နိုင်ပြီး အချိန်မီ အောင်မြင်အောင် ကုသပေးနိုင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။ အသားပိုအလုံးကို မြန်မြန် တွေ့လေလေ ကုသမှု စောစောပေးနိုင်ပြီး ပျောက်ကင်းစေမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ အထူးသဖြင့် ကင်ဆာအစောပိုင်းအဆင့်မှာ သိလိုက်ရင် အကောင်းဆုံးပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
အစာအိမ် နှင့် အူမကြီးစစ်ဆေးမှုများ
အစာအိမ် နှင့် အူမကြီး မှန်ပြောင်းကြည့်ခြင်း 40,200**
မတ်လ ၃၁၊ ၂၀၂၀ အထိ ရရှိနိုင်သော အခွင့်အရေး
အစာအိမ်မှန်ပြောင်းကြည့်စစ်ဆေးမှုအတွက် ဈေးနှုန်းအပေါ်တွင် ဘတ် ၁၀၀၀ လျှော့ပေးပါမည်။
အူလမ်းကြောင်းမှန်ပြောင်းကြည့်စစ်ဆေးမှုအတွက် ဈေးနှုန်းအပေါ်တွင် ဘတ် ၂၀၀၀ လျှော့ပေးပါမည်။
အစာအိမ်နှင့် အူလမ်းကြောင်းမှန်ပြောင်းကြည့်စစ်ဆေးမှုအတွက် ဈေးနှုန်းအပေါ်တွင် ဘတ် ၃၀၀၀ လျှော့ပေးပါမည်။
စစ်ဆေးမှုအားလုံးအတွက် လိုအပ်သော မေ့ဆေးများ ပါဝင်ပြီးဖြစ်ပါသည်။
ပြင်ပလူနာဝန်ဆောင်မှု မှ အပ ဆရာဝန် ဝန်ဆောင်ခများ ပါဝင်ပြီး ဖြစ်ပါသည်။
အစာအိမ်မှန်ပြောင်းကြည့်စစ်ဆေးမှုတွင် အစာအိမ်ဘက်တီးရီးယား နှင့် အစာအိမ်တစ်ရှူးစစ်ဆေးမှုများ ပါဝင်ပြီး ဖြစ်ပါသည်။
စစ်ဆေးမှုအားလုံးအတွက် မှန်ပြောင်းကြည့်အခန်းခများ နှင့် စစ်ဆေးပြီးနားနေခြင်းအတွက် အခန်းခများ ပါဝင်ပြီး ဖြစ်ပါသည်။
စစ်ဆေးမှုများအားလုံးတွင် မစစ်ဆေးမီ ကြိုတင်ပြင်ဆင်မှုများနှင့် ဝမ်းနှုတ်ဆေး စသည်တို့အတွက် မပါဝင်ပါ။
အူလမ်းကြောင်းမှန်ပြောင်းကြည့်ရာတွင် အသားပိုအလုံး (၁ စင်တီမီတာအောက်) ဖြတ်ထုတ်ရန် လိုအပ်ပါက တစ်လုံးလျှင် ဘတ် ၁၅၀၀ ကျသင့်ပါမည်။ (အထူးအသုံးပြုရသော ပစ္စည်းကိရိယာကြေး မပါဝင်ပါ။) အသားပိုအလုံး ၂ စင်တီမီတာအောက် ဖြစ်နေလျှင်လည်း ကျသင့်သလောက် ပေးရပါမည်။
အဆိုပါအချက်အလက်များနှင့်ပတ်သက်ပြီး ဆေးရုံမှ လိုအပ်သလို ပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုများကို ကြိုတင်အကြောင်းမကြားဘဲ ပြုလုပ်နိုင်ပါသည်။
အထူးဈေးနှုန်းများသည် ထိုင်းနိုင်ငံသားများနှင့် ထိုင်းနိုင်ငံတွင်နေထိုင်သော နိုင်ငံခြားသားများအတွက်သာ အကျုံးဝင်ပါသည်။
အသေးစိတ်သိလိုသည်များကို အသည်းနှင့် အစာခြေမှုဆိုင်ရာ အင်စတီကျု၊ ဆစ်မီတဝေ့ဆူခွန်ဗစ်ဆေးရုံကြီး (သို့မဟုတ်) info@samitivej.co.th. သို့ အီးမေးလ် ပေးပို့ စုံစမ်းနိုင်ပါသည်။
ဒဏ်ရာအသေးဆုံးခွဲစိတ်မှုဖြစ်တဲ့ အသေးစားမှန်ပြောင်းကြည့် ခွဲစိတ်ကုသနည်းဖြင့် အူမကြီးကင်ဆာကို ခွဲထုတ်လိုက်ခြင်း (minimally invasive surgery)
အရင်တုန်းက အူမကြီကင်ဆာကို ခွဲထုတ်တယ်ဆိုတာ ဗိုက်ကိုဖွင့်ပြီး အူမကြီးက ကင်ဆာဖြစ်နေတဲ့အပိုင်းကို ခွဲရတာဖြစ်လို့ လူနာဟာ ခွဲစိတ်တဲ့ဒဏ်ကို ခံရတာ၊ ပြန်လည်နာလန်ထူလာဖို့ အချိန်တွေပေးရတာ၊ ကုန်ကျစရိတ် များတာ စတဲ့ ခွဲပြီးတဲ့နောက်ပိုင်း သက်ရောက်လာတဲ့ ဝန်ထုပ်ဝန်ပိုးတွေ ရှိပါတယ်။ ခုတော့ ကံကောင်းထောက်မ စွာနဲ့ အူမကြီးမှန်ပြောင်းကြည့်ကုသတဲ့နည်းနဲ့ ဒဏ်ရာကို အသေးဆုံးဖြစ်အောင် ခွဲလို့ရနေပါပြီ။ ဗိုက်မှာ ခွဲရာ သေးသေးလေးပေးပြီး အဲဒီးအပေါက်လေးကတစ်ဆင့် အရမ်းအားကောင်းတဲ့ ကင်မရာလေးတပ်ထားတဲ့ မှန်ပြောင်းလေးထည့်လိုက်ပြီး ကင်မရာကနေ ကြည့်ပြီး ခွဲစိတ်တာဖြစ်ပါတယ်။ ပြွန်ချောင်းထိပ်မှာ ကင်မရာအပြင် ခွဲစိတ်တဲ့ကိရိယာလေးပါ တပ်ထားပြီး အူမကြီးရဲ့ ကင်ဆာဖြစ်နေတဲ့အပိုင်းအပြင် ဆက်စပ်နေတဲ့ သွေးကြောတွေနဲ့ ပြန်ရည်ကြောအကြိတ်တွေကိုပါ ဖယ်ထုတ်ပစ်နိုင်ပါတယ်။ ခွဲချိန်လည်းကြာ၊ နာလန်ထဖို့လည်းကြာတဲ့အပြင် ဈေးလည်းကြီးတဲ့ ဗိုက်ဖွင့်ခွဲစိတ်တဲ့နည်းနဲ့ ယှဉ်လိုက်ရင် ခွဲရတာလည်း သေးပါတယ်။ ဒဏ်ရာသေးတဲ့အတွက် နာလန်ပြန်ထူဖို့လည်း အလွန်မြန်ပါတယ်။ ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးလည်း နည်းပြီး ကုန်ကျစရိတ်လည်း သက်သာပါတယ်။ ဆက်လက်ဖတ်ရှုရန်
အသေးစားမှန်ပြောင်းကြည့် အူမကြီးခွဲစိတ်မှုအကြောင်း သိကောင်းစရာ
အသေးစားမှန်ပြောင်းကြည့် အူမကြီးခွဲစိတ်မှု ဆိုတာကတော့ ဗိုက်မှာ ခွဲရာ သေးသေးလေးပေးပြီး အဲဒီအပေါက်လေးကတစ်ဆင့် အရမ်းအားကောင်းတဲ့ ကင်မရာလေးတပ်ထားတဲ့ မှန်ပြောင်းလေးထည့်လိုက်ပြီး ကင်မရာကနေ ကြည့်ပြီး ခွဲစိတ်တာဖြစ်ပါတယ်။ ပြွန်ချောင်းထိပ်မှာ ကင်မရာအပြင် ခွဲစိတ်တဲ့ကိရိယာလေးပါ တပ်ထားပြီး အူမကြီးရဲ့ ကင်ဆာဖြစ်နေတဲ့အပိုင်းအပြင် ဆက်စပ်နေတဲ့ သွေးကြောတွေနဲ့ ပြန်ရည်ကြောအကြိတ်တွေကိုပါ ဖယ်ထုတ်ပစ်နိုင်ပါတယ်။
အူမကြီးဆိုတာ ရှည်လျားတဲ့ ပြွန်ချောင်းတစ်ခုဖြစ်တာမို့ ခွဲစိတ်မှုဟာလည်း ကင်ဆာဖြစ်နေတဲ့ ဧရိယာတစ်ဝိုက်မှာ ၅ – ၇ စင်တီမီတာလောက်အထိ ရှည်လျားနိုင်ပါတယ်။ ဒါ့အပြင် ပတ်ဝန်းကျင်က ဆက်စပ်နေတဲ့ သွေးကြောတွေနဲ့ ပြန်ရည်ကြောအကြိတ်တွေဟာလည်း ကင်ဆာဆဲလ်တွေ ပြန့်ပွားမှုကို အထောက်အပံ့ပေးနေတာမို့ အနီးအနားပတ်ဝန်းကျင်က သူတို့ကိုပါ တစ်ပါတည်း ဖယ်ထုတ်ပစ်ရပါတယ်။
မှန်ပြောင်းကြည့် အူမကြီးခွဲစိတ်မှုရဲ့ ကောင်းကျိုးရလဒ်များ
သုတေသနပြုမှုတွေအရ အူမကြီးကင်ဆာကို ဗိုက်ဖွင့်ပြီးတော့ရော မှန်ပြောင်းကတစ်ဆင့်ရော ခွဲထုတ်ပစ်နိုင်တယ် လို့ ဆိုပါတယ်။ နှစ်မျိုးလုံးကတော့ အူမကြီးအတွက် အဆင်ပြေပါတယ်။ မှန်ပြောင်းကြည့်ခွဲစိတ်မှုမှာတော့ အောက်ပါ ကောင်းကျိုးလေးတွေ ရှိပါတယ်။
အူမကြီးကို ဖြတ်ထုတ်ပြီးတဲ့အချိန်မှာ ၀.၅ ကနေ ၁ စင်တီမီတာအတွင်းမှာရှိတဲ့ အမာရွတ်သေးသေးလေး ၅ ခု နဲ့ ၄ – ၆ စင်တီမီတာအတွင်းမှာရှိတဲ့ ချုပ်ရိုး ရှည်ရှည်လေး ၁ ခု ပဲ ကျန်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဗိုက်ဖွင့်ပြီး ခွဲထုတ်ရင်တော့ ချုပ်ရိုးအမာရွတ်ဟာ ၁ ခုပဲ ကျန်မှာဖြစ်ပေမယ့် အဲဒီ ၁ ခုက ၁၅-၂၀ စင်တီမီတာ တောက်လျှောက် အရှည်ကြီး ဖြစ်ပါတယ်။
ခွဲစိတ်မှု သေးသေးလေးဖြစ်တဲ့အတွက် ခွဲပြီးချိန်နာကျင်မှုဟာ ဗိုက်ဖွင့်တာနဲ့ ယှဉ်လိုက်ရင် အပုံကြီး နည်းပါတယ်။
ချုပ်ရိုးပြန်ပွင့်ပြီးအနာဖြစ်တာတို့ ပိုးဝင်ပြီးအနာမကျက်တာတို့ စ တဲ့ ကိစ္စတွေလည်း နည်းသွားပါတယ်။ အမာရွတ်ဟာ သေးတဲ့အတွက်နောက်ဆက်တွဲ အနာဆေးထည့်ရတဲ့ ကိစ္စဟာလည်း လွယ်ကူသွားပါတယ်။
လူနာအနေနဲ့ ပြန်လည်နာလန်ထူလာဖို့လည်း မြန်ဆန်ပါတယ်။ မှန်ပြောင်းကြည့်ခွဲစိတ်ထားတဲ့ လူနာဟာ ၁ရက် ၂ ရက်အတွင်းမှာပဲ လမ်းပြန်လျှောက်လို့ ရပါတယ်။ ဗိုက်ဖွင့်ထားတဲ့သူဆိုရင်တော့ အနည်းဆုံး ၁ ပတ် အိပ်ရာထဲမှာ နေရမှာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
လူနာဟာ မြန်မြန်ဆန်ဆန် နာလန်ထလာတဲ့အတွက် ခွဲစိတ်ပြီးနောက်ပိုင်းမှာ ကုန်ကျတဲ့ ဆေးရုံတက်စရိတ် စတဲ့ ကုန်ကျမှုတွေလည်း လျော့သွားပါတယ်။
မှန်ပြောင်းကတစ်ဆင့် ခွဲစိတ်ရတာဟာ ခွဲစိတ်ဆရာဝန်အနေနဲ့ ဗိုက်ဖွင့်ပြီးခွဲရတာထက် ပိုပြီး အသေးစိတ် ပြတ်ပြတ်သားသား မြင်နိုင်တာမို့လို့ ဥပမာ အစားဟောင်းအိမ်ကင်ဆာလိုမျိုး ခက်ခဲတဲ့ ကိစ္စတွေမှာ ဒါဟာ တော်တော်အရေးပါ ပါတယ်။
မှန်ပြောင်းကြည့် အူမကြီးခွဲစိတ်မှုဟာ အသက်အရွယ်မရွေး သင့်တော်ပါတယ်။ တခြားနည်းနဲ့ ခွဲစိတ်ခံဖို့ အလွန် အားနည်းနေတဲ့ လူနာတွေအတွက်လည်း အဆင်ပြေပါတယ်။ ဒါကြောင့် ဗိုက်ဖွင့်ပြီးခွဲစိတ်တဲ့အခါမှာ နောက်ပိုင်း နာလန်ထလာဖို့ ခက်ခဲတဲ့အပြင် အခြားဘေးထွက်ဆိုးကျိုးတွေအတွက်ပါ သတိထားရမယ့် အသက်ကြီးနေတဲ့ လူနာတွေ အတွက် အထူး သင့်လျော်ပါတယ်။ နောက်တစ်ခုက တစ်ချို့ ကင်ဆာမျိုးရိုးဗီဇကြောင့် အူမကြီးတစ်လျှောက် ကင်ဆာဆဲလ်တွေ ပြန့်ပွားနေပြီးဖြစ်လို့ ကုသပေးဖို့ ခက်ခဲတဲ့ လူနာတွေအတွက်လည်း ဒီခွဲစိတ်နည်းက ပိုကောင်းပါတယ်။ ယုတ်စွအဆုံး အကုန်ပြန့်နေပြီဖြစ်လို့ အူမကြီးတစ်ခုလုံး ထုတ်ပစ်ရတယ်ဆိုအုန်းတော့ ကျန်တဲ့ ကျန်းမာနေသေးတဲ့ အစိတ်အပိုင်းတွေကို သေသေချာချာလေး ပြန်ဆက်ပြီး ချုပ်ပေးခဲ့နိုင်ပါတယ်။
“ပစ်မှတ်ထားကုထုံး” လို့ ခေါ်တဲ့ တစ်ဦးချင်းအလိုက် တိကျတဲ့ဆေးကိုပေးခြင်းဖြင့် အူမကြီးကင်ဆာကို ကုသခြင်း
ဆေးပညာရဲ့ စဉ်ဆက်မပြတ် ဆန်းသစ်မှုတွေကြောင့် အခုဆိုရင် ကင်ဆာဝေဒနာရှင်တွေရဲ့ သက်တမ်းကို သိသိသာသာ ဆွဲဆန့်ထားပေနိုင်ပြီ ဖြစ်ပါတယ်။ “ပစ်မှတ်ထားကုထုံး” လို့ခေါ်တဲ့ လူနာတစ်ဦးချင်းအလိုက် တိကျတဲ့ဆေးတွေကို ပေးတဲ့ နည်းလမ်းနဲ့ အူမကြီးကင်ဆာကို လုံးဝပေျာက်ကင်းသွားတဲ့အထိ ကုသပေးနိုင်နေပြီ ဖြစ်ပါတယ်။ ဆက်လက်ဖတ်ရှုရန်
အူမကြီးကင်ဆာအရေး ဘယ်ဆေးနဲ့ ကုကြမလဲ။
အူမကြီးကင်ဆာ (အထူးသဖြင့် အဆင့် ၄ လို့ခေါ်တဲ့ အူမကြီးတင်မကတော့ဘဲ နီးစပ်ရာကိုယ်တွင်းအင်္ဂါတွေကိုပါ ကင်ဆာဆဲလ်တွေ ပျံ့နှံ့နေတဲ့အဆင့်) ကုသဖို့ရာမှာ ထိရောက်တဲ့ ဆေးဝါးပေါင်းများစွာ ဒီနေ့မှာ ရရှိနေပြီ ဖြစ်ပါတယ်။ အမျိုးအစားတွေအားဖြင့်ကတော့ အောက်ပါအတိုင်း ခွဲခြားပြနိုင်ပါတယ်။
ခီမိုသရပီဆေးများ ခီမိုဆေးသွင်းတယ်ဆိုတာကတော့ ကင်ဆာဆဲလ်တွေကို တိုက်ရိုက် ကုသတာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ဒီဆေးနဲ့ ကုတဲ့အခါ ကျန်းမာတဲ့ဆဲလ်တွေကိုပါ ဖျက်ဆီးပစ်တာမို့လို့ လူနာမှာ သိသာထင်ရှားတဲ့ ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးတွေဖြစ်တဲ့ ဆံပင်တွေကျွတ်ကုန်ခြင်း၊ ပျို့အန်ခြင်း နဲ့ ဝမ်းလျှောခြင်း စတာတွေကို ခံစားကြရပါတယ်။
ပစ်မှတ်ထားကုထုံး ပစ်မှတ်ထားကုထုံးကတော့ ခီမိုသရပီနဲ့ အတူ တွဲကုလေ့ ရှိပါတယ်။ ပစ်မှတ်ထား ကုထုံး ဆိုတဲ့အတိုင်း ကင်ဆာဆဲလ်များကို ပစ်မှတ်ထားပြီး ကုသပါတယ်။ ကင်ဆာဆဲလ်တွေဆိုတာကလည်း တစ်ခု နဲ့ တစ်ခု မတူကွဲပြားကြပေမယ့် ဒီကုထုံးနဲ့ ကုနိုင်ပါတယ်။ ပစ်မှတ်ထားကုထုံးနဲ့ ကုရင် တခြားမသက်ဆိုင်တဲ့ ဆဲလ်တွေပါ ရောပြီးပျက်စီးတာ နည်းတဲ့အတွက် ခီမိုဆေးချည်းသက်သက် သွင်းပြီး ကုတာထက် ပိုပြီးအကျိုးများစေပါတယ်။ အဆင့် ၄ ကင်ဆာလူနာကို ခီမိုချည်းသက်သက်သွင်းပြီးကုလို့ ၁ နှစ်ခံရင် ပစ်မှတ်ထားကုထုံးနဲ့ တွဲ ကုတဲ့အခါ ၃ နှစ်ခံတာကို တွေ့ရပါတယ်။ ဒီလို အကျိုးကျေးဇူးတွေကြောင့် ခီမို နဲ့ ပစ်မှတ်ထားကုထုံးကို တွဲပြီး ကုသလာကြတာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ခီမိုချည်းသက်သက်နဲ့ ကုလို့ အောင်မြင်တဲ့ နှုန်းဟာ ၃၀ ကနေ ၅၀% ရှိတဲ့အချိန်မှာ ၂မျိုးတွဲကုရက် ၆၀ ကနေ ၈၀% အထိ အောင်မြင်တာကို တွေ့ရပါတယ်။ သူ့ရဲ့ အကောင်းဆုံးအချက်ကတော့ ကင်ဆာဆဲလ်ကိုသာ ပစ်မှတ်ထား တိုက်ခိုက်တာဖြစ်တဲ့အတွက် ဘေးထွက်ဆိုးကျိုး အလွန်နည်းပါတယ်။
ကိုယ်ခံအားကို မြှင့်တင်ပြီးကုသခြင်း ဒီနည်းနဲ့ ကုသရင် သွေးဖြူဥတွေအပေါ်မှာ သက်ရောက်မှု ရှိပါတယ်။ အထိရောက်ဆုံးဖြစ်စေဖို့ ကင်ဆာတစ်သျှူးတွေကို အသေးစိတ်ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာကြည့်ဖို့ လိုပါတယ်။ ဒီလို ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာဖို့နဲ့ အဲဒီလူနာဟာ ကိုယ်ခံစွမ်းအားကို မြှင့်တင်ပေးတဲ့နည်းနဲ့ ကုသဖို့ သင့်မသင့်ကို သက်ဆိုင်ရာ ဆရာဝန်အဖွဲ့ရဲ့ ခေါင်းဆောင်က တာဝန်ယူပြီးတော့ ဆုံးဖြတ်ရပါတယ်။ ကင်ဆာဆဲလ်ရဲ့ သဘော သဘာဝဟာ သွေးဖြူဥထဲမှာပုန်းခိုနေပြီးတော့ ကြီးထွားပြန့်ပွားလာတာမို့လို့ သူတို့ကို ရှာဖို့ခက်သလို သူတို့ကိုချည်းပဲ ရွေးပြီး ဖျက်ဆီးပစ်ဖို့လည်း ခက်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် သွေးဖြူဥတွေထဲကို ကိုယ်ခံစွမ်းအား မြင့်မားစေတဲ့ ဆေးကို သွေးကြောထဲကတစ်ဆင့် ထိုးထည့်ပေးလိုက်ခြင်းအားဖြင့် သွေးဖြူဥတွေဟာ ကင်ဆာဆဲလ်တွေကို ရှာဖွေနိုင်ပါတယ်။ နောက်ဆုံးမှာတော့ ပုန်းနေတဲ့ ကင်ဆာဆဲလ်တွေဟာ ကိုယ်ခံစွမ်းအားမြင့် သွေးဖြူဥတွေရဲ့ တိုက်ထုတ်မှုအောက်မှာ ကျဆုံးပျက်စီးသွားကြရပါတော့တယ်။
အူမကြီးကင်ဆာကို ဆေးအခြေပြုကုသမှုရဲ့ ရလဒ်များ
အူမကြီးကင်ဆာဆိုတာ ထိုင်းနိုင်ငံမှာ ဒီကနေ့ အဖြစ်များတဲ့ ကင်ဆာတစ်မျိုးပဲဖြစ်ပါတယ်။​ စောစာရှာတွေ့လေလေ အောင်မြင်အောင် ကုသနိုင်ဖို့ အခွင့်အရေး များလေလေပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ တခြားကို ပျံ့နေပြီဖြစ်တဲ့ အဆင့် ၄ ကင်ဆာမျိုးကို တောင်မှ စနစ်တကျ ကုသမှုကို သေသေချာချာ ခံယူလို့ရှိရင် ခီမိုဆေးသွင်းပြီးကုသမှု ခံယူသူတွေထက်တောင် ပိုပြီး ကောင်းကောင်းနဲ့ အသက်ရှည်ရှည် နေသွားနိုင်ကြပါတယ်။
ခီမိုသရဖီ၊ ပစ်မှတ်ထားကုထုံးနဲ့ ကိုယ်ခံစွမ်းအားမြှင့် ကုသနည်းတွေ အနက် ဘယ်နည်းနဲ့ပဲကုကု လူနာဟာ သူ့ရဲ့ ကုသမှုကို အပြည့်အဝရရှိအောင်တော့ သက်ဆိုင်ရာ ဆေးဘက်ဆိုင်ရာဆရာဝန်တွေက တာဝန်ယူရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
အဲဒီတော့ ကိုယ့်မှာ အူမကြီးကင်ဆာဖြစ်နေပြီဆိုတာကို သိလိုက်ရုံနဲ့ သွေးပျက်ထိတ်လန့်နေစရာ မလိုပါဘူး။ ဆရာဝန်နဲ့ သေသေချာချာတိုင်ပင်ပြီး ဘယ်နည်းနဲ့ ရွေးချယ်ကုသပြီး ဒီရောဂါကို အမြစ်ဖြုတ်ပစ်ရမလဲဆိုတာကို ဆုံးဖြတ်ရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ အထက်မှာ ဖော်ပြခဲ့သလိုပါပဲ။ အဆင့် ၄ ဖြစ်နေပြီဆိုရင်တောင် စနစ်တကျနဲ့ သေသေချာချာကုရင် ထင်တာထက်ပိုပြီး အသက်ရှည်နိုင်ပါတယ်။ တစ်ချို့လူနာတွေဆိုရင် ကုသမှုခံယူပြီးတဲ့နောက် အေးအေးဆေးဆေး နေနိုင်နေတာ ၅ နှစ် တောင်ကျော်လာပြီဆိုတာကို တွေ့ရပါတယ်။
အူမကြီးကင်ဆာဆိုတာ စောစောသိရင် စောစောပျောက်အောင်ကုသလို့ရပါတယ် ဆိုတာကိုပဲ ထပ်ပြောပါရစေ။ ဒါကြောင့် နှစ်စဉ် ကျန်းမာရေးစစ်ဆေးမှုကို မှန်မှန် ပြုလုပ်စေလိုပါတယ်။ အသက် ၄၅ နှစ်ကျော်လာပြီဆိုရင် အစာအိမ်နဲ့ အူလမ်းကြောင်းမှန်ပြောင်းကြည့် စစ်ဆေးမှုကို ခံယူပြီး အူမကြီးကင်ဆာ ရှိမရှိ စစ်ဆေးရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။​ တကယ်လို့ ကိုယ့်မိသားစုထဲမှာ အူမကြီးကင်ဆာဖြစ်ဖူးတဲ့သူရှိနေတယ်ဆိုရင်တော့ ၄၅ နှစ်အထိ စောင့်မနေဘဲ စောစောစစ်ဖို့ တိုက်တွန်းချင်ပါတယ်။